चीनले पनि लगायो अमेरिकी अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध, अमेरिकाको प्रतिबन्धबाट नडराउने धम्की ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/चीनले पनि लगायो अमेरिकी अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध, अमेरिकाको प्रतिबन्धबाट नडराउने धम्की !
एजेन्सी- चीन र अमेरिकाबीच दुश्मनी बढिरहँदा चीनले पनि केही अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
पछिल्लो समय चीन र अमेरिकाबीच ताइवान र हङकङको विषयलाई लिएर तनाब बढेको हो । अमेरिकाले हङकङमा चीनले लागु गरेको सुरक्षा कानुनको विरोध जनाउँदै आएको छ । यसवाहेक कोरोनाभाइरसका कारण पनि अमेरिका र चीनबीच तनाब कायम छ ।
चीनले साउथ चाइना सीमा अमेरिकाको कुनै पनि प्रतिबन्धबाट नडराउने जनाएको छ । अमेरिकाले साउथ चाइना सी र यस क्षेत्रमा अस्थिरता र समस्या सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै चीनले कुनै पनि प्रतिबन्धसँग नडराउने जनाएको हो ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चुङयिङले प्रेस ब्रिफिङका क्रममा भनिन्, “अमेरिका थप गलत बाटोमा जाने छैन भन्‍नेमा चीन आशावादी छ ।” पूर्वी एसियाका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञले चिनियाँ अधिकारीहरु र कम्पनीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चतावनी दिएपछि चीनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो ।
यसअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले चीनको साउथ चाइन सीमा तटीय स्रोतहरुको खोजी गर्ने क्रियाकलाप ‘पूर्णरुपमा अवैधानिक’ भएको बताएका थिए । उनले बेइजिङको विवादित जलस्रोतमा ‘नियन्त्रका लागि बुलिङ अभियान’ सञ्‍चालन गरेको भन्दै आलोचनासमेत गरेका थिए ।
अमेरिकी विदेशमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिपछि चिनियाँ सरकारी सञ्‍चारमाध्यम ग्लोबल टाइम्सले अमेरिका साउथ चाइन सीमा स्थिरताका लागि सबभन्दा ठूलो खतरा भएको र सबैभन्दा ठूलो ‘म्यानिपुलेटर’ भएको जनाएको थियो ।
ग्लोबल टाइम्सले एक विश्लेषकलाई उदृत गर्दै लेखेको छ, “चीनले आसियन सदस्यहरुसँग मिलेर साउथ चाइना सीमा कोड अफ कन्डक्टमा (सीओसी) बृहत् परामर्श गरिरहेको र जसले देखिने गरी प्रगति गरिरहेको छ । तर, अमेरिकाले यस क्षेत्रमा आफ्ना पाखुरा फैलाएर चीन र आसियन मुलुकबीच विवाद सिर्जना गर्ने उद्देश्यले असह्य अभिव्यक्ति र गतिविधिहरु गरिरहेको छ । जसले आसियन क्षेत्रको स्थायित्वलाईसमेत अवमूल्यन गरेको छ ।”
नाम उल्लेख नगरिएको विश्लेषकलाई उदृत गर्दै ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ, “संयुक्त राज्य अमेरिका सबभन्दा ठूलो म्यानिपुलेटर र साउथ चाइन सीको शान्ति र स्थायित्वका लागि सबभन्दा ठूलो खतरा हो ।”
जस्तोसुकै बिजि भएपनी एकपटक अबश्य पढौ ! नपढे तपाईंलाई पछुतो हुनेछ ।।
रातीमा मोजाभित्र प्याज राख्नुस्, तपाईंले नसोचेको फाइदा पुग्छ
८ जना प्रहरीको ज्यान लिएर नेपाल पसेको आशंका गरिएका बिकास दुबे मन्दिरबाट भर्खरै गिरफ्तार,